Antonio Conte mala burin doonaa hadii caawa laga badiyo kooxdiisa | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Antonio Conte mala burin doonaa hadii caawa laga badiyo kooxdiisa
Published on February 12, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(12-2-2018)Macalinka reer Talyaani iyo kooxda Chelsea Antonio Conte in Blues ay adag tahay sida ay dib ugu soo laaban lahayd wadada guulaha sababa la xidhiidha cadaadiska xoogan ay xili kastaa kala kulmayaan shaqsiyaadka qaar.
Chelsea ayaa la dhibtooneysa xili ciyaareedkan farqiga dhibcaha ay u jirto kooxda hogaamineyso horyaalka Premier League-ga ee Man City, iyagoo ku guul dareestay inay difaacdaan maadaama ay xili ciyaareedkii lasoo dhaafay ay kusoo guuleysteen.
Blues ayaa haatan kaga jirta dhanka kala sareenta horyaalka Premier League-ga booska 5-aad, kahor inta aan la baasan kulankooda caawa ay kusoo dhaweyn doonaan garoonka Stamford Bridge Bromwich Albion, kaasoo lagu soo xeri doono kulamada isbuucaan ee 27-aad horyaalka dalka England.
Chelsea ayaa go’aan ka gaartay tababaraha reer talyaani ee Antonio Conte kaas oo ay is fahmi la’yihiin isaga iyo maamulka kooxdiisa.
Sida ay baahisay Telegraph, maamulka Chelsea ayaa doonaya in la burburiyo heshiiska Antonio Cone ee kooxda marka uu dhamaado xiliciyaareed kaan.
Maamulka ayaan awoodin inay shaqada ka cayriyaan tababaraha reer talyaani waqtigaan, maadama uu xaq u yeelanayo in Chelsea ay siiso xuquuqdiisa oo dhamaystiran oo ah 26.7 milyan oo Ginni oo ah mushaarkii uu qaadan lahaa sanadaha uga haray heshiiskiisa.